Ogaden News Agency (ONA) – Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya ma qurbajoogbaa?
Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya ma qurbajoogbaa?
Xafiiska gacanyaraha u ah gumaysatada Itoobiya ee fadhiya magaalada jigjiga ayaa afka furtay lagana siiyay qurba joogta, qurbe joogta idinkaa dhibka wada, idinkaa dagaalka wada, qurba joogta waanu soo dhawayn, xafiisbaan u furaynaa, shirbaanu qurba joogta u qabanaynaa.
Somaalidu waxay ku maahmaahdaa dhariga maxaa karka keenay? jawaabta la dabadhigana ay tahay dabkaa ka keenay! Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeenya ayaa gacanta ku haysa in ka badan 90% dhulka Somaalida Ogadeenya, marka laga reebo magaalooyinka waaweyn ee caanka ah oy CWXO ay isku gaadaamay kuna xadideen dhaqdhaqaaqa gumaysiga & kalkaalayaashiisa oo heegan galiyay ciidanka gumaysiga & kuwa u afduuban nacabka Itoobiya. Ciidanka Itoobiya oy horboodayaan dabadhoonka gumaysiga ee dhidid dhawrka u ah ciidanka Wayaanaha ayaa ku jahawareerey xaalada adag ee soo foodsaartay. akhristow Sida aad ka dheehan karto qarba qarbada haysta gacanyaraha gumaysiga & kala hadalka aafeeyey masuuliyiin beenaadka uu gumaysigu umidaaro. hadii xitaa aadan ahayn xog ogaal waa mid kuu mudutuulan karta somaalidu waxay dhahdaa xaajo waa xod-xodasho & xuluulasho. Xaabkaama saara maanta tabarta gumaysiga & xaalada uu ku sugan yahay gumaysiga Itoobiya ee gabalkiisii dhacay.Waxaadna ka dheehan kartaa marxalada qalafsan & anfariirka haysta gumaysiga Itoobiya iyo ficiladiisa wuxuushnimada ah ee uu ku kucayo.
Sida caadiga ah hadii shaqsi ama kooxi ay ku fashilmaaan iska caabinta fikirka ama kacdoonka ka soo horjeeda waxay raadiyaan maaro kale oo looga wareego, hadii ayna lexjeclo ka hayn bulshada gadoodsan waxay isku dayaan inay ku caabiyaan cudud & cabudhin taasoo inta badan ku dhamaata jahawareer. Odhaah Somaaliyeed ayaa ahayd neef gawracan geedo kama leexdo. Dhidid-dhawrka oo uu dabada ka riixayo nidaamka gumaysiga ee maarayn waayay kuna lumay xaaladan adag ee soo food saartay ee ciidanka wadaniga xoraynta ogadeenya ay dhufayska ugu galeen ayaa u muuqata mid soo koobi doonta cimriga cagajiidka ah ee nidaamka qaybi oo xukunka ku dhisan .
Kooxdan u dulaysan cadawga oo fulinaya qorshaha gumaysiga ayaa waxay u qabteen shir shaqsiyaad ku busaaradsaday dibada & saalax-tuug oo ka noqday umada dhexdeeda tuke canbaarleh loona aqoonsaday nin dhacay hantidii umadda ka dibna meel uu galo markuu waayay cudur nafsaani ah uu ku dhacay badbaado/magangaliyo udoontay gumaysiga macangaga ah. Waxaa uu shirkii qabridahar ka cadeeyay saalax-tuug ninkii ka soo raacay Jarmalka in ay in muddo ah lala haayeen safaarada Itoobiya ee Baljemka ku taala xidhiidh toos ah taasi oo dhakafaar ku noqotay shacabkii qasabka lagu keenay shirka ayna u arkeen jaajuus god-uu galo waayay oy iridahu kasoo xidhmeen.
Shirkii ay ku qabteen jawaasiita & dabaqoodhiga doolka ahi magaalada Qabridahare ayaa Saalx-tuug oo iska dhigaya xog-ogaal ay shacabkii qasabka lagu soo ururiyay ee madasha shirka ay dusha kaga waardiyaynayeen ciidanka TPLF ay qosol jaanta wadheen markuu ku habaabay hadalkii oo waxyaabo uuna aqoon & xirfad toona u lahayn ka hadlay oo xitaa uu garan waayay inuu ku dhawaaaqo tuulooyinka uu lahaa waan tagnay & shaqsiyaadkii shirka kasoo qayb galay magacooda. Sidoo kale Saalax-tuug wuxuu ka qiray shirka dhexdiisa in ururka ONLF laga saaray kadibna ay sidan xal moodeen (xaqa hadii afka la qabto feedhahuu ka dilaacaa). Sida ka muuqata cajaladaha dacaayad ahaanta ay u soo galiyeen websites ka u adeega gumaysiga ayna cadeeyeen dadkii shirka lagu jujuubay. Saalax-tuug ayaa qarsan waayay arintii loo soo wakiishay ee ahayd in ay sheegtaan in heshiis ay la galeen Itoobiya, wuxuuna sheegay in isaga & shaqsiyaadkii la socday ay isdhiibeen taasoo ay masuuliyiinta gumaysiga ee shirka fadhiday ay markiiba dhibsadeen afkana isa saareen ayna la yaabeen sida fashilan ee uu u hadaaqay. Dhanka kale Saalax ayaa cadeeyay in uuna waxba ka ogayn arimaha halganka intii uu ku jiray JWXO wuxuuna sheegtay inuu ahaa qof madluul ah oo iska dhexsocda halganka. Mar uu arintaas ifinaayay waxuu sheegay in hawlgalada ay ciidanka xoraynta ogadeenya fuliyaan & tacadiyada ay ciidanka gumaysigu ka gaystaan Ogadeenya uuna waxba kala socon. Su’aasha ay iswaydiiyeen dadkii meesha fadhiyay waxay ahayd masuuliyadii la sheeganay ma waxay noqotay idaacad ku masuul? aaway ciidankii ka amarqaadanayay hadii uuna la socon waxa ogadeenya ka socda?
Dhanka kale qurbajoogta u daaduumay dibada hadana looga gacan haadin banaanka ee madasha shirka timid maxaa ka qaxiyay dalkoodii? Nina gurigiisa looma dhaamo mana u guuro dhul aan kiisa ahayn ilaa dani tidhaado. Ninbaa yidhi ma aniga ayaa walaan mise Cadan ayaa laga heesayaa? Cadar ninkii roob mooda isaga & garaadkiisa! Arintan ayaa noqotay sagaare xaar muuqday aas aastaa. Waxaa soo shaacbaxday arimahii hooseeyay ee guntiga lagu qarinaayay uuna gumaysigu usoo xanbaariyay hayinkiisa u duloobay kana rajo dhigay xoriyada, keenada gumaysiga tabarta daranna u hogaansamay una jiidmaya marba meesha uu u hogaamiyo gumaysigu.
Ciidanka & hawl-wadeenada JWXO waxay ka hawlgalaan wadanka Ogadeenya sidoo loogu talagalay ayayna waajibkooda u gudan hayaan, waana kuwa ugu daata habeen & maalin xeryaha gumaysiga una diiday in uu ku tamashleeyo ciida gumaysigu ciida Ogadeenya.
W/Q Geeddan Cali